विश्वका ५ घातक भाइरसः अधिकांशको उपचार अझै असम्भव - HelloKhabar
विश्वका ५ घातक भाइरसः अधिकांशको उपचार अझै असम्भव
२०७८ भाद्र ४, शुक्रबार १५:११
कोरोनाभाइरस अहिले चर्चामा रहेको खुंखार हत्यारा। लाग्छ कि विश्वको कुनै न कुनै कुनामा यस्ता डरलाग्दा भाइरस दिनानुदिन सृजित भइरहेका छन्। यो लेख तयार पार्दा सम्म कोरोनाभाइरसले विश्वभरमा लाखौ जनाको ज्यान लिइसकेको छ। करोडौ भन्दा बढी यो भाइरसले संक्रमित भएका छन्।
पहिले नै पहिचान गरिएका जिवित प्राणी तथा ब्याक्टेरिया अनि भाइरस जो मानव स्वास्थ्यको लागि खतरनाक मानिदैनन् त्यसलाई बायोसेफ्टी -१ को नियम अनुसार सावधानी अपनाइ अध्ययन गरिन्छ।घातकपना बढेअनुसार विभिन्न जीव तथा भाइरस अनि ब्याक्टेरियाहरुलाई बायोसेफ्टीका माथील्ला चरणका नियम अनुसार सावधानी अपनाइन्छ।
ज्यानमारा, उपचार पत्ता नलागेका तथा नयाँ भाइरस अनि ब्याक्टेरियालाई बायोसेफ्टीको सबैभन्दा माथील्लो चरण, BSL4को नियम अनुसार सावधानी अपनाइ प्रयोगशालामा अनुसन्धान गरिन्छ। कोरोना भाइरस BSL4मा पर्छ। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (CDC) ले यी चरणहरु वर्गीकृत गर्छ।
यो भाइरस पनि BSL-4 भाइरस हो। मारबर्ग हेमोरहेजिक फिभर (Marburg hemorrhagic fever) यसको पुरा नाम हो। यसले संक्रमण भए २३ देखि ९० प्रतिशत मृत्युको सम्भावना हुन्छ। संक्रमितसंग नजिकको सम्पर्कबाट यो भाइरस सर्छ। टाउको दुखाइबाट सुरु हुन्छ, ज्वरो आउँछ,। टाउको र हात बाहेक शरिका अन्य भागमा डाबर आउँछ। शरिरका महत्वपूर्ण भित्री अंगले काम गर्न छोड्छ, र अत्याधिक आन्तरिक रक्तस्राव पश्चात मृत्यु हुन्छ। यसको कुनै उपचार छैन। र अन्तिम संक्रमण सन् २०१२ मा उगान्डामा देखिएको थियो।
HFRS ले तीव्र किड्नी फेल गराउँछ भने HPS ले फोक्सोमा पानी भरिदिन्छ। HFRS लागेपछि १ देखि १५ प्रतिशत मृत्युको संम्भावना हुन्छ। त्यस्तै HPS लागेपछि ३८% मृत्युको सम्भावना हुन्छ। HPS को पछिल्लो संक्रमण अमेरिकामा सन् २०१२ मा देखिएको थियो।
यसको लक्षण ज्वरोबाट सुरु हुन्छ, छाती दुख्छ। अनुहार सुन्निन्छ। मस्तिष्कमा जलन बढ्छ। र मानिस बहिरो हुन्छ। सुरुवाती चरणमा मात्र यसको उपचार सम्भव छ।
रेबिज खोप सुलभ पाइने भएकाले अहिले यसको माहामारी छैन। तर यदाकदा संक्रमित जनावरहरुले टोकेमा मानिसमा देखिने गरको छ। यो भाइरसले केन्द्रिय स्नायु प्रणालीमा आक्रमण गर्छ, जसले संक्रमितको मृत्यु निश्चत हुन्छ। यसको संक्रमण पश्चात पछिल्ला चरणमा ज्वरो आउने, विचार र बोली अस्पष्ट हुने, दृष्टिभ्रम, मतिभ्रम हुने, हिंसात्मक व्यवहार देखाउने लक्षण देखिन्छ। यी ५ घातक भाइरस बाहेक डेङ्गु र इन्फ्लुएन्जा पनि घातक भाइरसकै सूचीमा पर्दछ।
सेतो पुतलीबाट लाग्ने शापुले अन्धाेसम्म बनाउँछ, जाेखिममा बालबालिका, कसरी बच्ने ?
के तपाई गलत तरिकाले सुतिरहनुभएको त छैन ? यो हो सही तरिका
हातमा यी रेखा छन् भने तपाईको विदेश यात्रा सफल हुनेछ
राज्यलाई २ अर्ब ५३ करोड बिजुलीको बिल नतिरेका अग्रवाललाई नै सरकारकाे पदक
ब्यानर हेलाेखबर - २०७८ भाद्र ४, शुक्रबार १५:११
लागू औषधसम्बन्धी मुद्दा फितलो बनाउने विवादित सरकारी वकिल घिमिरेलाई जनसेवाश्री पदक
फिचर २०७८ भाद्र ४, शुक्रबार १५:११
खानामा साँग्ला र झिँगाा खुवाउँदै घुर्मीको अमिसा होटल
आफ्नै ग्राहकको अर्बौ ठग्ने एनसेलले ल्यायो सर्वसाधरणको दिमाग भुट्ने यस्तो योजना
शेरधन राईको अनियमितताः १ करोडमा किन्नुपर्ने गाडीमा साढे ३ करोड खर्च